10 पैसा बचत लागि सुझावहरू तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सीबीडी सुरु गर्न
एक व्यापार शुरू / सीबीडी
एक व्यापार शुरू
यो सीबीडी बजार बाहिर हतार गर्न मोहक हुन सक्छ ढिलो अघि, तर तपाईं एक छप र एक splat सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यी निर्देशनहरू पालना.
छवि क्रेडिट: OlegMalyshev | गेट्टी तस्बिरहरू
आनन्द ओर्गेनिक्स को संस्थापक
7 जनवरी 20196मिनेट पढाइ
योगदानकर्ता द्वारा व्यक्त राय हरियो उद्यमी आफ्नो छन्.
यो सीबीडी उद्योग को सम्भावित booming हेर्न सजिलो छ. एक भीड बजार मा एक मजबूत ब्रान्ड निर्माण मुश्किल भाग हो. मेरो आफ्नै ब्रान्ड सीबीडी सुरु मा, म परीक्षण र त्रुटि मार्फत धेरै सिकेका. जबकि यी सुझावहरू आफ्नो सफलता ग्यारेन्टी छैन, हामी तिनीहरूले तपाईं साधारण पासो जोगिन र छिटो र प्रभावकारी लन्च को बाटो मा राख्न मदत गर्नेछ आशा.
सम्बन्धित: र आफ्नो कम्पनी सीबीडी बजार कसरी
1. आफ्नो ज्ञान विस्तार
साँच्चै सीबीडी सफल ब्रान्ड विकास गर्न पहिलो कदम हो भनेर बुझ्न. मलाई, यसलाई Google खोजीको एक श्रृंखला सुरु, को सीबीडी बारेमा हामी सक्छ सबै सिक्ने: यसको लाभ, इतिहास, यसको विभिन्न निकासी प्रक्रिया, र थप. Ensuite, हामी धेरै विशेषज्ञहरु र अन्य क्षेत्र कम्पनीहरु भेट. तपाईं एक प्रदायक पाउन उत्पादन बारे पर्याप्त थाहा अघि अनुसन्धान को दुई महिना लाग्यो. यो हामी गए हामीलाई सचेत निर्णय गर्न अनुमति.
हामी हाम्रो पुस्तिका पढ्न उद्योग सीबीडी सबै newcomers प्रोत्साहन परम सीबीडी . यो गाइड सीबीडी मा विस्तृत जानकारी समावेश, इतिहास, यसको उत्पादन र यसको स्वास्थ्य लाभ. यो तपाईंको ज्ञान विस्तार मा एक उत्कृष्ट पहिलो कदम हो.
2. अगाडि एक कदम
तपाईं साँच्चै आफ्नो आफ्नै व्यवसाय सीबीडी सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सुरु हुनुपर्छ. हामी रोजेको गर्ने धेरै मानिसहरू कुरा, यस क्षेत्रको विश्लेषण गर्न समय बिताइरहेका र हरेक उत्तम निर्णय गर्ने प्रयास. तदनुसार, तिनीहरूले कहिल्यै केहि.
सिद्धताको अपेक्षा राख्ने अग्रिम देखि राख्न नदेऊ. तपाईं जान्नु आवश्यक (माथि हेर्न), तर तपाईं बिल्कुल थाहा त्यहाँ थाहा छ सबै छ गर्न आवश्यक छैन. बजार आफ्नो उत्पादन प्राप्त. तपाईं रूपमा जान्नु आवश्यक के को भन्दा सिक्न र.
3. बुद्धिमानीसाथ नाम चयन
सीबीडी अगाडि सार्न आफ्नो क्षमता मा एक विशाल प्रभाव हुनेछ तपाईं आफ्नो कम्पनी कल के. आज दुखद वास्तविकता छ कि बैंकहरू सीबीडी बेच्छ जो कसैले काम गर्न चाहँदैनन् छ. Si le nom de votre entreprise contient les mots “CBD”, “chanvre”, “cannabis” ou toute autre référence explicite à CBD, बैंक शायद अन्यत्र तपाईंको व्यापार लिएर सुझाव गर्नेछ.
रातो झण्डा उठाउनु गर्दैन नाम चयन र तपाईं सजिलै विकास गर्न सक्छौं. कसले के तपाईंको व्यापार पाँच वा दस वर्ष मा हेर्नेछ थाह? Nous avons choisi “Joy Organics” parce que c’était simple, सम्झना सजिलो र हिज्जे गर्न सजिलो. यो पनि अन्य उत्पादनहरु सजिलै विस्तार, को सीबीडी संग गर्न केही छ कि ती सहित.
अन्तिम टिप्पणी: तपाईं सही नाम पाउन भने, तर तपाईं वेबसाइट उपलब्ध छैन भनेर पत्ता लगाउन, तपाईं कुनै भाग्य हुन सक्छ. वेबसाइट प्रयोगकर्ता छ तर यो प्रयोग गरिएको छ भने, उहाँले बेच्न इच्छुक छ भने हेर्न मालिकलाई सम्पर्क. यो राम्रो नाम लागि खर्च लायक छ.
सम्बन्धित:6तपाईंको कम्पनी भांग नामकरण अघि प्रश्न
4. तपाईंको LLC बनाउन
तपाईं आफ्नो नाम जस्तै चाँडै आफ्नो LLC सेट अप. यो आवश्यकता एउटा महंगा र मुश्किल प्रक्रिया हुन. हामी कानूनी जूम हाम्रो कन्फिगर गर्न प्रयोग. यो सस्ता विकल्प थियो र लिए कम 20 मिनेट. हाम्रो अनुरोध तुरुन्तै पठाइएको र बारेमा हाम्रो कर्मचारी पहिचान नम्बर थियो थियो 10 दिन. यो चरण लागि exorbitant रकम भुक्तानी गर्न कुनै आवश्यकता पक्कै पनि थियो.
5. आफ्नो लोगो डिजाइन
संग धेरै विकल्प उपलब्ध, यो चरण सजिलो छ र एक भाग्य खर्च गर्दैन. यस्तो Fivver वा रूपमा अनलाइन बजार 99 डिजाइन स्वतन्त्र डिजाइनर सेवाहरू सयौं प्रदान. हामी संग गए 99 रेखाचित्र. सेवा तपाईं आफ्नो मूल्य सेट गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसपछि तपाईं डिजाइनर नमूनाहरू विश्वव्यापी प्राप्त हुनेछ. तपाईं सबै भन्दा राम्रो तपाईं सुहाउने लोगो गर्न परिणाम कम. यो प्रक्रिया तीन पाँच दिन लिन्छ तर Fivver भन्दा बढी महंगा हुन सक्छ.
6. आफ्नो वेबसाइट डिजाइन
वेब साइट डिजाइन नयाँ कम्पनीहरु तल bogged प्राप्त गर्न सक्छन् जो अर्को क्षेत्र हो. यो आवश्यक छैन स्क्राच एक नयाँ वेबसाइट बनाउन छ. Google मा प्राप्त र मोडेल खोजी. निःशुल्क वा WordPress जस्तै सस्तो प्रयोग, Squarespace कहां Wix. यो टेम्पलेट प्रयोग र सामग्री र तस्बिरहरू यसलाई भर्न सक्ने एक डिजाइनर फेला.
यो चरण लागि महत्वपूर्ण: सीबीडी कारोबार हाल आफ्नो किनमेल गाडी गर्न Shopify प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. हामीले यसको सट्टा WooCommerce प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौँ.
7. सही साझेदार चयन
यो तपाईंको व्यापार DBC सुरु गर्दा तपाईं गर्नेछ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय मध्ये एक छ. हाम्रो ईटा र मोर्टार भण्डारमा, 50% हाम्रो यातायात सबै वफादार ग्राहकहरु आउँछ को. यातायात सिफारिश हाम्रो दोस्रो स्रोत. किन? मान्छे परिणाम किनकी तिनीहरूले प्राप्त, त्यसैले तिनीहरू थप लागि फिर्ता आउन.
असफल उत्तम तरिका एक उत्पादन काम गर्दैन प्रस्ताव छ. मान्छे किन्न जारी रूपमा आफ्नो ब्रान्ड बढ्नेछ.
सम्बन्धित:5सबै भन्दा राम्रो खुद्रा विक्रेता सीबीडी चयन गर्न प्रमुख
8. सीबीडी ठानेको प्रोसेसर फेला
आनन्द ओर्गेनिक्स खोल्ने सबैभन्दा तनावपूर्ण भाग हाम्रो व्यापारी खाता को संगठन थियो. अमेरिकामा, त्यहाँ सीबीडी को बिक्री व्यवहार बैंकहरू एक आश्चर्यजनक सानो नम्बर हो. उद्योग अब पूर्ण उडान छ: मानिसहरू कुरा भन्नेछु, त्यसपछि वरिपरि बारी र अर्को के. तपाईं होसियार हुनुपर्छ बन्द च्यातेर प्राप्त गर्न.
र तपाईं बस वर्ग वा अर्को लोकप्रिय उपचार कम्पनी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: तिनीहरूले बेच्न छैन सीबीडी. बरु यो, तपाईं विशेष प्रक्रिया कार्य कि सीबीडी एक प्रोसेसर फेला पार्न छ. थप, तपाईं अमेरिकामा आधारित एक प्रोसेसर फेला पार्न छ.
तपाईंले एक विदेश आधारित प्रोसेसर प्रयास भने (बेलायत, मेक्सिको र एशिया लोकप्रिय ठाउँ हुन्), तपाईँले त्यो पाउनुहुनेछ 30% आफ्नो बिक्री इन्कार गरिनेछ. यी ग्राहकहरु आधा आफ्नो क्रेडिट कार्ड कम्पनी कल गर्नेछ, यो एक ठगी छैन भन्न, र आफ्नो खरीद पूरा गर्न फिर्ता हुनेछैन. को 15% बाँकी हराएको बिक्री. थप, प्रत्येक ग्राहक विदेश कारोबार शुल्क प्राप्त हुनेछ. यो अवस्थामा केही राम्रो सम्बन्ध निर्माण.
9. लोकप्रिय उत्पादनहरु संग सुरु
यसलाई आफ्नो सूत्रहरू सिर्जना गर्न मोहक छ, जबकि, यो पासोमा पर्नु छैन. हाम्रो अनुभव, यी उत्पादनहरु marketed छैन. उत्पादनहरु सबै भन्दा राम्रो बेच लीन.
हाल, रंजक सीबीडी उत्पादनहरु को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार छन्. दोस्रो दाना छन्. यी दुई क्षेत्रमा सुरु गर्न ठूलो ठाउँ हो. आफ्नो उद्देश्य बजार मा जाने हो कि सम्झना. एक पटक तपाईं स्थापित छन्, तपाईं कम सिद्ध उत्पादनहरु प्रयोग गरिरहेका सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
एक उथला बजार बन्द अवधिमा संघीय कर्मचारीहरु निःशुल्क घाँस प्रदान